တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်အကြွေစေ့ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆဲလ်ဘက်ထရီလက်ကိုင်
CR1220 Coin Battery Holder, Lithium Coin Cell Battery Holders များ
12X20mm ဆဲလ်များအတွက် Thole Hole Mount (THM) & Surface Mount (SMT) ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤကိုင်ဆောင်သူကို UL အဆင့် 94V-0 ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော phosphor ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဆက်အသွယ်များသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုများရရှိစေရန်နှင့်အဆက်အသွယ်ခုခံမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ သင့်လျော်သောဘက်ထရီထည့်သွင်းမှုသေချာစေရန်အဆက်အသွယ်တစ်ခုစီကို၎င်း၏ polarity ဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားထားသည်။
ပေါ့ပါးပြီးအကြမ်းခံသောဤ PCB အကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူများသည်အဓိကဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများအားလုံးလစ်သီယမ်အကြွေစေ့ဆဲလ်များအားလုံးကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော notched battery slot ကိုပေးသည်။
Coin Battery Holder ၏ Product Parameter (Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် CR1220 Coin ဘက်ထရီလက်ကိုင်
ပစ္စည်း: PPS + Phosphor Bronze Gold flash၊ Nickle plate ပေါ်တွင်
အရွယ်အစား: .115.1*4.0 မီလီမီတာ
ဆဲလ်အရေအတွက် ဆဲလ် ၁
၁။ ဤအကြွေစေ့ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူသည်သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောထုပ်ပိုးမှုအတွက် profile နိမ့်သည်။
2. ယုံကြည်စိတ်ချရသော spring tension အဆက်အသွယ်များသည်အနိမ့်အဆက်အသွယ်ခုခံမှုကိုအာမခံသည်။
4. အကြမ်းခံဆောက်လုပ်ရေး၊ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်
၅။ လေဟာနယ်နှင့်စက်ကောက် & နေရာစနစ်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်။
6. Base material UL rated 94V-0 ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရည်ပျော်အများစုတွင်မမြင်နိုင်ပါ။
Coin Battery Holder ၏ ၄ င်း Product Details
အခြေခံ: ဖန်ခွက်တင်ထားသော PPS UL 94V-0;
အဆက်အသွယ်များ၊ ၀.၂ မီလီမီတာအထူ Phosphor Bronze Gold flash၊ Nickle plate ပေါ်တွင်
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: CR1220 အကြွေစေ့ဘက်ထရီပိုင်ရှင်
ura ¢ ura Duracell, Eveready, Panasonic, Ray-O-Vac, Sanyo, Varta, Toshiba, Seiko နှင့်အခြားအဓိကဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများ
¢€¢ဗွီဒီယိုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ power လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပံ့ပိုးမှု
rop €¢ Microprocessors များနှင့် Microcomputer မှတ်ဉာဏ်ကိုင်ထားသည်။
ebook €¢ Notebook နှင့် lap top applications များ
iat €¢ Miniaturized ဘက်ထရီပါဝါပစ္စည်းများ
Coin Battery Holder ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ CR1220 အကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူအားလုံး။
Coin Battery Holder ၏ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း
Coin Battery Holder ၏အမေးအဖြေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင်နှစ် ၂၀ ကြာနေပြီ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်း ၁၀၀ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
hot Tags:: အကြွေစေ့ကိုင်ဆောင်သူ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်သူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သူ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်
Button Cell Battery Holder
CR1225 ဆဲလ်ဘက်ထရီ Holder